KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 5-aad: Caawo iyo Sheekada Xiisaha Ay Leedahay | Filimside.net
Home » Kun Habeen iyo Habeen » KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 5-aad: Caawo iyo Sheekada Xiisaha Ay Leedahay
KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 5-aad: Caawo iyo Sheekada Xiisaha Ay Leedahay
Waxaa wali noo socotay sheekadii ninkii taajirka iyo iyo cifrriitkii.
Habeenkii labaad markii la gaaray ayay Dunyaazaad ku tiri walaasheeda Shaharzaad “abaayooy maad noo dhameysid sheekadii ninkii taajirk ahaa iyo cifriitkii iyo wixii kala qabsaday ninkii odayga ahaa iyo deeradii?”
Markaas ayay Shaharzaad dhahday “jaceyl iyo sharaf ayay ii tahay inaan idiin dhameystiro hadii uu boqorka ii idmo”
Markaas ayuu boqorkii oo mar horaba sheekada isku sii diyaariyay yiri “noo wad sheekada oo dhameey”
Markaas ayay shaharzaad tiri: Waxaa isoo gaartay boqorow markii uu odaygii arkay in uu dibiga oo ooynaya ayuu ninkii xoolaha uga masuulka ahaa ku yiri war dibigaan iga wad oo mid kale bal iikeen.
Cifriitkiina wuxuu la yaabanyahay sheekada yaabkeeda iyo sideey wax usocdaan.
Ninkii odayga ahaa wuxuu yiri sayidkii jiniyadow waxaas oo dhan markey dhacayaan naagteyda wey na daawaneysaa waxayna leedahay Dibigaan qal wuu buuranyahay ee qal iwm, laakiin aniga Dibiga eegmadiisa markaan kanaxay ayaan iska sii daayay waxaana ku dhahay ninkii xoolaha ii qaabilsanaa Dibigaan iga wad waan ka yaabanahee.
Subaxii markii la gaaray waxaa ii yimid ninkii xoolaha ii qaabilsana wuxuuna igu yiri bishaareyso, markaas ayaan waxaan dhahay maxaa dhacay??
Wuxuu igu yiri: shalay markii aad Dibiga iga wad itiri waan waday waxaana geeyay gurigeena, gurigana waxaa ii joogto gabar aan aniga dhalay oo iyadoo yar sixirka baratay.
Markii aan Dibigii guriga geeyay oo ay aragtay ayay wajiga ka daboolataay kadibna qososhay hadana ooysay, markaas ayay iigu tiri “Aaboow maxaad noogu soo galineysaa nimanka ajaanibta naga ah anagoon ogeyn??”
Anigoo yaaban ayaan waxaan ku dhahay “Aaway nimanka aad sheegeyso? mida kale maxaa la qososhay oo hadana la ooysay?
Waxay igu tiri “Dibigaan aad ujeedo waa wiilkii Sayidkaaga wuuna sixranyahay waxaana sixirtay naagtuu aabihiisa qabo, taas waa sababta aan u qoslay sababta aan u ooyayna waxay tahay lo’dii la qalay waxay aheyd hooyadiisa”
Aniga markii aan hadalkaas gabadhii ka maqlay waan aamini waayay adiga ayaana kuu imid.
Markaas ayuu odaygii yiri jiniyahow markii aan maqlay hadalkii ninkii ii qaabilsanaa xoolaha ayaaan dag-dag gurigiisa ku aaday, waxaana utagay gabadhiisa waxaana weydiiyay ma runbaa wuxuu aabahaaga iisheegay?
Markaas ayay igu tiri haa waa runteyda Dibigaan waa wiilkaaga, waana beerkaaga gabalkiisa.
Anigii waan iska ooyay waxaana gabadhii ku dhahay “hadaad wiilkeyga sixirka iiga furto waxaan ku siin doonaa maalkeyga oo dhan,
Markaas ayay gabadhii igu tiri “Aniga maalkaaga dan kama lihi labo shuruud ayaan wataa, hadaad ii sameyneyso wiilkaaga sixirka waan ka furayaa.
Shardiga koowaad wuxuu yahay inaad wiilkaaga ii guuriso,
Kan labaadna wuxuu yahay in aan naagtaada sixro waayo kama aamin qabo dhagarteeda”
Markaas ayaan gabadhii ku dhahay intaas aad sheegtay waan kuu sameynayaa waxaana kuusii dheer inaan kusiiyo hantideyda oo dhan naagtaana sidaad doontid ka yeel,
Markey hadalkeygii maqashay ayay waxay soo qaadatay dheri yar oo meesha yaalay waxayna ku shubtay xoogaa biyo ah iyadoo wax ku akhrisay, kadibna biyihii ayay waxay ku firdhisay dibigii waxayna dhahday “Dibiyahow hadii ALLAAH adoo dibi ah ku abuuray ha isbadalin oo dibigaaga iska ahoow, hadiise aad sixrantahay kusoo laabo abuurkaagii hore idinka Ilaahay”
Markaas ayuu Dibigii dhalaalay wuxuuna isku badalay insaan markaas ayaan isku duubay markaan arkay inuu wiilkeygii yahay waxaana ku dhahay “Allaan kugu dhaarshee iiga sheekeey sidee waxa udhaceen”
Markaas ayuu sheekadii biloow ilaa dhamaad iiga sheekeeyay iyo waxay ku sameysay naagteydii ina adeerteey aheyd.
Markaas ayaan willkii gabadhii u guuriyay, iyadana waxay sixirtay naagteydii oo deeradaan isku badashay.
Anigana waan isaga soo tagay dhulkii oo dhan si ay wiilkeyga iyo gabadhaas nabad galyo ugu noolaadaan.
Anigoo jidkaan maraayo ayaana waxaan arkay ninkaan meesha cidlada ah kaligii fadhiya oo ooynaya,
Kadibna markaan wareystay ayuu qisadii qabsatay iyo seey wax udhaceen iiga sheekeey, ee jiniyahow hadey sheekadeyda ku cajab galisay ninkaan dhiigiisa sadax meelood meel ii hibeey.
Markaas ayuu jinigii la yaabay sheekada ninka odayga ah iyo deeradii ka dhaxeysay, wuxuuna ku jeestay deeradii asigoo yiri “Ma runbaa wuxuu sheegayo odaygaan?”
Markaas ayay madaxa uruxday “HAA”.
Markaas ayuu jingii yiri walaahi waa sheeko cajiib ah weyna icajab galisay marka ninkaan dhiigiisa sadax meelood meel waan kuu hibeeyay.
Markuu jinigii hadalkaas yiri ayaa waxaa hadlay ninkii watay labadii eey, wuxuuna yiri “Jiniyahoow hadii aan ana kaaga sheekeeyo sheekadeyda oo ay ku cajab galiso ninkaan dhiigiisa sadax meelood meel ma ii hibeyneysaa?”
Markaas ayuu jinigii yiri hadii ay icajab galiso waan kuu hibeyn doonaa.
Markaas ayuu ninkii labada eey watay sheekadiisii ku bilaabay:
Sayidkii jiniyadow waxaad ogaataa in labadaan eey ee ila socda ay yihiin walalaheyga aniga ayaana sadax ku ah, aabaheena wuu dhintay wuxuuna dhaxal ahaan nooga tagay sadax kun oo diinaar, waxaana qeybiyay dhaxalkii oo mid kasta waxaa kusoo aaday kun diinaar.
Aniga qeybteydii waxaan ku furtay Tukaan waxbaan soo iibsanayay waana sii iibinayay, walaalaheyga xoolahoodii wey la safreen anigoo uga digaayo safarka iyo dhibkiisa si uu ganacsiga safareyda u galaan waxayna maqnaayeen mudo sanad ah, laakiin waxay soo laabteen iyagoo gacmo maran oo waxba heysan, waxaan ku dhahay, waan idiin sheegay in safarka dhibaatooyin leeyahay ee maxad u safarteen,
Markaas ayay igu dhaheen waa Qadar Alle maantana waxba ma heysano hadalna waxba ma noo taraayo, markaas ayaan waday waxaana geeyay tukaankii anigoo dhar iyo cuntaba siiyay, kadibna waxaan kudhahay imaqla waan isla shaqeysaneynaa oo ganacsigaan ayaan sii wadeynaa sanadkiina mar ayaa la xisaabinaa wixii faa’iido ee aan helno waan kala qeybsaneynaa.
Markaas ayay iga ogolaadeen, mudo sanad kadib markaan shaqeysanaya oo faa’iido fiican helnay ayay waxay igu dhaheen aan safarno waxaa laga yaabaa inaan soo faa’iidno balse waan ka diiday.
Wixii saas la ahaadaba iyagana maalin kasta igu haayaan aan saffarno ayaa markey mudo kasoo waregatay ogolaaday hadalkooda.
Waxaan xisaabiyay hantidii tukaanka taalay waxayna noqotay lix kun oo diinaar.
Markaas ayaan waxaan ku dhahay lacagta waan kala qeybineynaa sadax kun waan qaadaneynaa sadaxda soo hartay meel ayaan ku duuganeynaa si hadii hadhow usoo qasaaarno aan tan kale ugu baxsano.
Wey iga ogolaadeen kadibna waan safarnay.
Waxaa Aqrisay 3,346
4 Responses to KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 5-aad: Caawo iyo Sheekada Xiisaha Ay Leedahay
Aad ayaad u mahadsantihin bahda filmside
Go forward filmside
Maasha allaah waay igu socotaaa sheekada sxbka noo tarjumay boqolkiiba boqol wuu mahadsanyahay iyo website kaba all thanks sxb waxaan jeclaan lahaa inaad buug ku qortaaan
aad bd umhdsntihin wllo dhman ka hawlgalaysha webkan qaaliga ah pig repsect mrkas wxn wata codsi ah in maalinki lapo xlqadood nooga dhigtan hadii aad awodan gelin hore iyo caweyskii❤